Ankalazaina tsindraindray ny Andron'i Afrika miaraka amin'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany izay mampiray an-drenin'i Afrika
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ankalazaina tsindraindray ny Andron'i Afrika miaraka amin'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany izay mampiray an-drenin'i Afrika
"Avy tany Afrika daholo isika", Hoy ny Dr. Taleb Rifai, mpiaro ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany (ATB), ary ny sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha. “Izany no antony lehibe ho ahy ny niditra ho mpikambana ao amin'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany.”
Cuthbert Ncube, izay filoham-pirenen'ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany, dia nilaza fa hiaraka i Afrika amin'ireo fotoan-tsarotra ireo.
Ny Hon. Ny minisitry ny varotra sy ny indostrian'ny Zanzibar, Amina Salum Ali, dia nanana ny tendron'ny vehivavy ho an'ny indostrian'ny fizahantany ho tafavoaka velona. Nanaiky izy fa hiova lalao.
Ny Hon. Moses Vilakati, Minisitry ny fizahan-tany any Eswatini, dia nanentana ny firenena hiara-miasa amin'ny fanafoanana ny sakana amin'ny visa hahafahan'ny fivezivezena misosona. Ho fanampin'izay, nanantitrantitra ny politika iray momba ny fivarotana afrikanina mirindra izay mamela an'i Afrika hivarotra amin'ny toerana iray izy. Izany no hafatra sy tanjon'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina. Nandeha lavitra ny minisitra ary nanosika ny fitantanana fitodiana ho any Afrika ary nanonona ny filan'ny lanitra misokatra amin'ny politikam-piaramanidina afrika.
Alain St.Ange, filohan'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina ary mpilatsaka hofidina ho filohan'ny Seychelles, dia nanazava ny zavatra "mahatonga ny indostria handaka," ary ny faharetana no tiany holazaina.
Dr. Walter Mzembi, Lehiben'ny fiarovana ho an'ny ATB ary ny minisitry ny raharaham-bahiny teo aloha tany Zimbabwe, dia nanandrana nametraka ny fandrahonana COVID-19 ho amin'ny fomba fijery tena misy.
Samy nanazava ny maha-zava-dehibe ny fizahan-tany anatiny sy isam-paritra i Dr. Mzembi sy i Dr. Rifai rehefa fanarenana ny fizahan-tany mandalo izao krizy izao.
Phumza Dyani, Chief Chief of Innovation ao amin'ny Antenimieran'ny varotra Pan Africa, dia nanazava ny fiaraha-miasa Pan Afrikana niara-niasa. Nanazava fomba fohy sy lavitra izy.
Khaya Dlanga, CMO an'ny Rain ary mpanoratra tsara indrindra any Afrika Atsimo, dia nilaza fa “Tsy tokony hanavao ny governemanta, ny sehatra tsy miankina no manao izany. Ny governemanta ihany no mamela ny fanavaozana. ”
Ny dinika androany dia nokarakarain'ny Birao fizahantany afrikanina eo ambany fitarihan'i Zine Nkukwana, Filohan'ny Komity Marketing ATB, ary i Desiree Chauke no mpanelanelana amin'ny asa fanaovan-gazety miasa any amin'ny mpampita vaovao any Afrika Atsimo, SABC.
Anisan'izany ny hoe:
Andriamatoa Minisitra Amina Salum Ali, Varotra & Indostria ao Zanzibar
Hon. Moses Vilakati, Minisitry ny fizahan-tany any Eswatini
Khaya Dlanga, CMO an'ny Rain, ary mpanoratra tsara indrindra any Afrika Atsimo
Dr. Walter Mzembi, minisitry ny fizahan-tany teo aloha tany Zimbabwe
Phumza Dyani, Lehiben'ny Chief of Innovation ho an'ny Antenimieran'ny Varotra Pan Afrika
Alain St.Ange, minisitry ny fizahan-tany teo aloha tany Seychelles
Dr. Taleb Rifai, sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha ary filohan'ny ATB Project Hope
Ny antsipiriany misimisy kokoa momba ny hetsika anio dia hita ao amin'ny www.africantourismboard.com/africaday
Ny fizahan-tany dia antony iray mampisy ny firaisan-kina, ny fandriam-pahalemana, ny fitomboana, ny fandrosoana ary ny famoronana asa ho an'ny mponina ao Afrika
Toerana iray nahatonga an'i Afrika ho fizahan-tany IRAY eran'izao tontolo izao
Ny ATB dia manohana ny kaody eran-tany momba ny fizahantany UNWTO ho an'ny fizahan-tany izay manasongadina ny andraikitry ny UNWTO "tapa-kevitra sy afovoany", izay eken'ny General Assembly of the United Nations, amin'ny fampiroboroboana sy fampiroboroboana ny fizahan-tany miaraka amin'ny tanjon'ny fampandrosoana ara-toekarena, ny fahatakarana iraisam-pirenena, fandriam-pahalemana, fanambinana ary fanajana manerantany ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fahalalahana fototra ho an'ny rehetra tsy misy fanavahana ary tsy misy fanavakavahana.
Manome fitarihana ny Birao sy torohevitra amin'ny sehatra tokana sy iraisan'ny fikambanana mpikambana ao aminy.
Manome ny sehatra mahomby ho an'ny daholobe sy ny sehatra tsy miankina mba hiditra sy hanatratra.
Midira ao amin'ny ATB www.africantourismboard.com/join/